How to Handle Unwanted Pregnancy – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကိုယျမလိုခငျြတဲ့ ကိုယျဝနျနဲ့ပတျသတျပွီး ဘယျလိုလုပျသငျ့သလဲ
တကယျလို့ သငျဟာ မလိုခငျြတဲ့ ကိုယျဝနျကို လှယျထားရတယျဆိုတာ သိလိုကျပွီ ဆိုပါစို့…. ပထမဆုံး ပွောခငျြတာက ဒါဟာ သငျတဈယောကျတညျးမဟုတျဘူးဆိုတာပါပဲ….
ကွောကျရှံ့တာ… စိုးရိမျတာ…. ကိုယျ့ကိုယျကို အပွဈရှိတယျလို့ ခံစားရတာ… ရှကျတာ… ယူကွုံးမရဖွဈတာ…. ကိုယျ စီမံထားတဲ့ ဘဝ ရညျမှနျးခကျြတှအေားလုံး သဲထဲရသှေနျဖွဈသလို ခံစားမှူတှေ သငျ့အနနေဲ့ ဖွဈနနေိုငျပါတယျ…
အောကျမှာ ဖျောပွမယျ့ နညျးလမျးတှေ ကတော့… သငျမလိုခငျြတဲ့ကိုယျဝနျရခဲ့ရငျ… သငျ့ရဲ့ စိတျနဲ့ခန်ဓာကိုယျကို ဘယျလို ပွငျဆငျသငျ့လဲ…. သငျဘာတှေ လုပျသငျ့သလဲဆိုတာပါပဲ….
(1) သငျ့ကိုယျသငျ အခြိနျတဈခုပေးပါ
သငျ့ဗိုကျထဲမှာ လှယျထားရတဲ့ ကိုယျဝနျကို သငျခုခကျြခငျြး မခဈြနိုငျသေးဘူးဆိုတာ သငျ့အမှားလုံးလုံးကွီးမဟုတျပါဘူး…. ပထဆုံးသငျလြှောကျလှမျးဖို့ တှေးထားတဲ့ ဘဝနဲ့လှဲခြျောနတေဲ့အတှကျရယျ… ဘဝသဈကို ခြိနျညှိဖို့အတှကျရယျ…. သငျ့ကိုယျသငျ လုံလုံလောကျလောကျ နားဖို့ အခြိနျတဈခုပေးလိုကျပါ…
(2) ကိုယျဝနျဆောငျရခွငျးနဲ့ပတျသကျရငျ ကောငျးတဲ့အခကျြတှကေိုပဲ အာရုံစိုကျပါ
မမြှျောလငျ့ဘဲ ကိုယျဝနျရသှားခဲ့ရငျ… ကွောကျရှံ့မှူနဲ့ သငျ့ကိုယျသငျ ခှငျ့မလှတျနိုငျမှူတှကေ… သငျ့စိတျကို တခြိနျလုံး စိုးမိုးနနေိုငျပါတယျ… နောကျပွီး ဆိုးတဲ့အခကျြတှကေိုပဲ ထပျတလဲလဲ တှေးမိနနေိုငျပါတယျ….
ဒါပမေယျ့ အဲဒီလို ဆိုးတဲ့အခကျြတှအေစား…. ကောငျးတဲ့အခကျြတှကေိုပဲ အာရုံစိုကျကွညျ့လိုကျပါ…. ဥပမာ…. ကလေးလေး သငျ့ဗိုကျထဲမှာ ကွီးထှားလာတာကှုစ သငျမကွာခငျ တှရေ့တော့မယျ… ကိုယျနဲ့ကိုယျခဈြတဲ့သူရဲ့ သှေးသားတှပေေါငျးစပျပွီး မိသားစု ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရလေးတဈခု.. ဘဝသဈတဈခု ပိုဆိုငျရတော့မယျ… စသဖွငျ့ပေါ့…အစပိုငျးမှာ ခကျပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာ သငျဒီလိုတဖွညျးဖွညျးပွောငျးတှေးလာနိုငျတာ တှရေ့ပါလိမျ့မယျ…
(3) သငျ့ကို ကူညီဖေးမမယျ့ စောငျ့ရှောကျတဲ့ ပတျဝနျးကငျြ မှာနပေါ
မမြှျောလငျ့ဘဲ ကိုယျဝနျရသှားတာဟာ… သငျတဈယောကျတညျး တကယျကို မဟုတျတာပါ… သုတသေနတှအေရ အမရေိကနျနိုငျငံမှာ… ကိုယျဝနျဆောငျတှေ အားလုံးရဲ့ တဈဝကျဟာ မမြှျောလငျ့ဘဲ ရသှားတဲ့ ကိုယျဝနျတှေ ဖွဈကွပါသတဲ့…
သို့ပမေယျ့ သူတို့တျောတျောမြားမြား အဆငျပွတေဲ့ဘဝတဈခုကို တကျလှမျးသှားနိုငျကွတာ…. မိသားစုနဲ့ ခဈြခငျရသူတှရေဲ့ ကူညီဖေးမမှူကွောငျ့လို့ ဆိုပါတယျ…
(4) သငျ့ကိုယျပိုငျ အိပျမကျတှကေို လကျမလြှော့လိုကျပါနဲ့
သငျ့မှာ ကလေးတဈယောကျရှိသှားရုံနဲ့…. သငျဖွဈခငျြခဲ့တဲ့ အိပျမကျတှအေားလုံးကို ပဈလိုကျရတော့မယျဆိုတာ မဟုတျပါဘူး… အရငျတဈယောကျတညျးဘဝနဲ့စာရငျ သငျ့အိပျမကျတှဆေီ အရောကျလှမျးဖို့ ကွာရငျ ကွာလိမျ့မယျ…. ဒါပမေယျ့ သငျ့ရဲ့ပွငျးပွတဲ့စိတျဇှဲနဲ့ ကလေးတဈယောကျရှိလာခွငျးကပေးတဲ့ တှနျးအား တှကေ သငျ့စိတျကူးတှတေကယျဖွဈလာဖို့ ကူညီပေးမှာပါ….. မိခငျတှဟော တကယျတော့ စှမျးဆောငျရှငျ တှပေါပဲ…
ကိုယ်မလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ
တကယ်လို့ သင်ဟာ မလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို လွယ်ထားရတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ပြီ ဆိုပါစို့.... ပထမဆုံး ပြောချင်တာက ဒါဟာ သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ....
ကြောက်ရွံ့တာ... စိုးရိမ်တာ.... ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားရတာ... ရှက်တာ... ယူကြုံးမရဖြစ်တာ.... ကိုယ် စီမံထားတဲ့ ဘဝ ရည်မှန်းချက်တွေအားလုံး သဲထဲရေသွန်ဖြစ်သလို ခံစားမှူတွေ သင့်အနေနဲ့ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်...
အောက်မှာ ဖော်ပြမယ့် နည်းလမ်းတွေ ကတော့... သင်မလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်ရခဲ့ရင်... သင့်ရဲ့ စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လို ပြင်ဆင်သင့်လဲ.... သင်ဘာတွေ လုပ်သင့်သလဲဆိုတာပါပဲ....
(1) သင့်ကိုယ်သင် အချိန်တစ်ခုပေးပါ
သင့်ဗိုက်ထဲမှာ လွယ်ထားရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို သင်ခုချက်ချင်း မချစ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာ သင့်အမှားလုံးလုံးကြီးမဟုတ်ပါဘူး.... ပထဆုံးသင်လျှောက်လှမ်းဖို့ တွေးထားတဲ့ ဘဝနဲ့လွဲချော်နေတဲ့အတွက်ရယ်... ဘဝသစ်ကို ချိန်ညှိဖို့အတွက်ရယ်.... သင့်ကိုယ်သင် လုံလုံလောက်လောက် နားဖို့ အချိန်တစ်ခုပေးလိုက်ပါ...
(2) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင် ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပဲ အာရုံစိုက်ပါ
မမျှော်လင့်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရသွားခဲ့ရင်... ကြောက်ရွံ့မှူနဲ့ သင့်ကိုယ်သင် ခွင့်မလွှတ်နိုင်မှူတွေက... သင့်စိတ်ကို တချိန်လုံး စိုးမိုးနေနိုင်ပါတယ်... နောက်ပြီး ဆိုးတဲ့အချက်တွေကိုပဲ ထပ်တလဲလဲ တွေးမိနေနိုင်ပါတယ်....
ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ဆိုးတဲ့အချက်တွေအစား.... ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပဲ အာရုံစိုက်ကြည့်လိုက်ပါ.... ဥပမာ.... ကလေးလေး သင့်ဗိုက်ထဲမှာ ကြီးထွားလာတာကှုစ သင်မကြာခင် တွေ့ရတော့မယ်... ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ချစ်တဲ့သူရဲ့ သွေးသားတွေပေါင်းစပ်ပြီး မိသားစု ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရလေးတစ်ခု.. ဘဝသစ်တစ်ခု ပိုဆိုင်ရတော့မယ်... စသဖြင့်ပေါ့...အစပိုင်းမှာ ခက်ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ သင်ဒီလိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းတွေးလာနိုင်တာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်...
(3) သင့်ကို ကူညီဖေးမမယ့် စောင့်ရှောက်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် မှာနေပါ
မမျှော်လင့်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရသွားတာဟာ... သင်တစ်ယောက်တည်း တကယ်ကို မဟုတ်တာပါ... သုတေသနတွေအရ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ... ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ အားလုံးရဲ့ တစ်ဝက်ဟာ မမျှော်လင့်ဘဲ ရသွားတဲ့ ကိုယ်ဝန်တွေ ဖြစ်ကြပါသတဲ့...
သို့ပေမယ့် သူတို့တော်တော်များများ အဆင်ပြေတဲ့ဘဝတစ်ခုကို တက်လှမ်းသွားနိုင်ကြတာ.... မိသားစုနဲ့ ချစ်ခင်ရသူတွေရဲ့ ကူညီဖေးမမှူကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်...
(4) သင့်ကိုယ်ပိုင် အိပ်မက်တွေကို လက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့
သင့်မှာ ကလေးတစ်ယောက်ရှိသွားရုံနဲ့.... သင်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တွေအားလုံးကို ပစ်လိုက်ရတော့မယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး... အရင်တစ်ယောက်တည်းဘဝနဲ့စာရင် သင့်အိပ်မက်တွေဆီ အရောက်လှမ်းဖို့ ကြာရင် ကြာလိမ့်မယ်.... ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဇွဲနဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရှိလာခြင်းကပေးတဲ့ တွန်းအား တွေက သင့်စိတ်ကူးတွေတကယ်ဖြစ်လာဖို့ ကူညီပေးမှာပါ..... မိခင်တွေဟာ တကယ်တော့ စွမ်းဆောင်ရှင် တွေပါပဲ...